နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက်.. ဟိုရိုက် ဒီရိုက်..
လှလိုက်တဲ့ ကောင်းကင်ကြီး ...
လှလိုက်တဲ့ တိမ်တွေ ...
တောတောင် သစ်ပင်တွေ ရှုခင်းတွေကြည့်ရင်း ငြိမ်းကျော်ဝတ္ထုခေါင်းစဉ်လေး အမှတ်ရမိတယ်
တောနဲ့တောင်ခွင် လွမ်းဖွယ်မြင်သည် ... တဲ့။
လွမ်းတတ်ရင် လွမ်းချင်စရာ နော် ... ။
ခက်တာက ဘယ်သူ့ကို လွမ်းရမှန်း မသိတာပဲ... ဟီးးး
သိင်္ဂါရေ ဓါတ်ပုံတွေ လာကြည့်သွားတယ်။ အစ်မ အွန်လိုင်းပေါ် သိပ်အချိန်မပေးနိုင်လို့ ဘလော့ဂ်တွေကို မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
သြော်... မြန်မာပြည် ဓာတ်ပုံလေးတွေပါလား။ လွမ်းနေတာနဲ့ တ၀ကြီး ကြည့်သွားတယ် အစ်မရေ။ ကျွန်းတောက လှလိုက်တာ။ ပန်းပင်လေးရော၊ ပန်းပွင့်က တော်တော် မွှေးမယ်နော်၊ ခရေပန်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီး လှ။ အို... အကုန်လှနေတာပါပဲ။
ကျွန်းတောပုံ နဲ့ ကောင်းကင်ပုံကို သဘောကျတယ်။
ကောင်းကင်ပုံကတော့ ဘယ်သူ ရိုက်ရိုက် သဘောကျတာပဲ။ ကိုယ်က ကောင်းကင်ကြီးကို ချစ်တာကိုး။
လူပုံတွေ မပါတာ တော်ပါသေးတယ်။ အဲ . .သိင်္ဂါ အသတ်မခံရတော့ဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ :P
သဘာဝရှု့ ခင်းတွေ လွမ်းသွားပြီ
ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက် ကြည့်သွားပါတယ် ရှင့်
လာလည်ရင်း ရှုခင်းလေးတွေ ငေးသွားပါတယ်.. :)
ဓါတ်ပုံတွေက အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ၊ ကျနော့်
ဇာတ်လမ်းတွေအတွက် ယူသုံးလို့ ရမလားဗျ ...
ဟိုရိုက်ဒီရိုက်တော့လည်း ဟိုဖတ်ဒီဖတ်ပေါ့း)
တောပန်းလေးကို ကိုယ်က ခွာညိုတွေမှတ်နေတာ
ဒါနဲ့ရေတံခွန်ဆိုလို့ ရေလိုက်ရှာတာ ရေမတွေ့ဘူး ခမ်းနေတာလား..
စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းသလို ၀ိတ်လဲကျမှာ သေချာတယ်..
သဘာကျကျ ရိုက်ထားတဲ့ကင်မရာမန်းရဲ့ အစွမ်းကြောင့်
ခွါဖြူလို့ မေမြို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဘူးတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ပန်းပွင့်က ခွာညိုပွင့်နဲ့တူတယ်၊
ဟိုအကြောင်း သည်အကြောင်းတွေကလည်း ကောင်းပါတယ်၊
ပြင်စာဆိုတာ ပြည်မှာလည်း ရှိသလိုပဲ၊ ပြည်မှာ ခဏတော့ နေဖူးတယ်၊
shake..shake!! i love the pretty blue sky and lovely white clouds so much too!!
whenever i go out onasunny day, if i am not inahurry, i always try to take beautiful clouds+sky pictures too!
wms (gcc tgu..)